Ny mailaka dia nohavaozina miaraka amin'ny fanohanan'ny Workflow sy Bear | Vaovao IPhone
Ny mailaka dia nohavaozina miaraka amin'ny fanohanan'ny Workflow sy Bear
Tsy maty ny tontolon'ny mailaka, Izaho dia iray amin'ireo izay mieritreritra fa indray andro any dia hanana fiovana lehibe momba ny mailaka isika saingy marina fa ny filozofia fandefasana taratasy elektronika dia mbola manana be dia be. Ny zavatra nivoatra tamin'ny fisondrotana dia ny tontolon'ny mpandrindra mailaka, ny sasany mpitantana izay nanatontosa tsikelikely ny serivisy vaovao mifandraika amin'ny famokarana mba hahamora ny fiainana, na ahazoana aina kokoa.
Androany izahay dia manavotra ny Airmail, iray amin'ireo safidy tsara indrindra amin'ireo mpikarakara mailaka rehetra ananantsika ao amin'ny App Store. Tianay ny Airmail satria ny fanavaozana dia manohy manavao ny rindranasa, zavatra iray amin'ny farany mahatonga azy hanana safidy vaovao. Ankehitriny dia havaozina indray izy ity mba hahafahantsika miara-miasa aminy amin'ny fomba mora lavitra kokoa. Airmail dia nanampy fanampiana ny Workflow sy Bear ankoatry ny zavatra maro hafa ...
Ny zavatra tena mahaliana amin'ity fanavaozana ity dia Ankehitriny isika dia afaka mampiasa ny safidy rehetra amin'ny app Workflow hamoronana automatisation mivantana avy amin'ny AirmailMazava ho azy fa tsy maintsy manana ny app Workflow ianao, fa raha manana an'io ianao dia ho mora ampiasaina ity fanavaozana ity. Bear, iray amin'ireo tonian-dahatsoratra fanamarihana tsara indrindra, dia mahazo fanohanana mivantana avy amin'ny Airmail, afaka isika izao manaova naoty e-mail ao Bear amin'ny fomba tena tsotra. Izany rehetra izany miaraka amin'ny hetsika vaovao ao anatin'ny Menu 3D Touch, ho fanampin'ny fanatsarana ny fanamarinana ireo kaonty Gmail.
Fantatrao fa izy ireo 4,99 € fa ny tena marina dia tena mendrika izany AirmailRaha mitady manager mailaka tsara ianao izay hanatsara ny famokarana anao isan'andro, aza misalasala mahazo Airmail ho an'ny iOS. Araka ny hitanao dia havaozina matetika izy io ka hanana Airmail mandritra ny fotoana fohy. Izany koa rehetra izao, azonao ampiasaina amin'ny iPhone, iPad, ary na dia amin'ny Apple Watch aza izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Ny mailaka dia nohavaozina miaraka amin'ny fanohanan'ny Workflow sy Bear
Castle Creeps TD, lalao paikady iray hafa izay manodina ny iOS